Y-AHR Slurry Pump Parts Factory - China Y-AHR Slurry Pump Parts Mpanamboatra, mpamatsy
Fampidirana vokatra Ny impeller pump pump slurry dia afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny fiasan'ny pump slurry. Amin'ny alàlan'ny fihodinana, dia afaka manampy ny paompy slurry mifanaraka amin'ny filan'ny fitaovana. Mora simba ny impeller slurry pump, noho izany dia mikaroka ireo fitaovana manokana izahay mba hanitarana ny androm-piainan'ny impeller. Ireo mpanetsika paompy slurry dia ampiasaina hiatrehana ny slurry manimba miaraka amin'ny sombintsombiny. Izy ireo dia vita amin'ny fingotra voajanahary, fingotra synthetic, rubber EPDM, Ruby Nitrile, na hafa toy ny ...
Ny faritra mando vita amin'ny kodiarana dia fanoherana mahery vaika sy fanoherana ny harafesina, matetika ampiasaina amin'ny fepetra miasa asidra. Toy ny fanodinkodinana amin'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany, slurry misy poti kely ary tsy misy sisiny matevina. Ny ampahany amin'ny famindran-toerana dia misy ny Cover Plate Liner, ny lozam-pifamoivoizana, ny lozisialy takelaka, ny sisin-tsoratry ny takelaka vita amin'ny takelaka. Ny fitaovana vita amin'ny fingotra nampiasainay dia manana fanoherana ambony noho ny fitaovana hafa rehetra amin'ny fampiharana slurry sombin-javatra tsara. Ireo antioxidant sy anti degradents ampiasaina amin'ny fitaovantsika dia manana tantely ...
Slurry Pump Expeller Ring dia ampiasaina amin'ny paompy slurry AH / HH / L / M, ny peratra expeller dia miara-miasa amin'ny expeller ho an'ny paompy slurry. Tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny famehezana ny paompy fotsiny izy ireo, fa mampihena ny hery afovoany. Ny endrika sy ny fitaovan'ny expeller dia manan-danja amin'ny fiainany serivisy Ity tombo-kase ity dia mety amin'ny ankamaroan'ny fampiharana pumping slurry. Manome tombony lehibe izy io fa tsy mila rano ny fihary. Mpivarotra mihazakazaka ao amin'ny peratra misy akora mitovy aminy ary miara-miasa amin'ireo lava-bato ao aorinan'ny f ...
Ny slurry pump tenda bush dia iray amin'ireo faritra mando ao anaty paompy slurry marindrano izay mitarika ireo slurries mankany amin'ny impeller, izy io dia liner sisin-tsiranoka izay mifamatotra amin'ny takelaka fisaronana. Ny lozam-boalavo dia mahazatra amin'ny paompy lehibe kokoa, satria ny lozabe sy ny volute liner dia matetika ao anaty singa iray matevina ao anaty paompy kely. Ny famolavolana kirihitrala slurry pump bush dia mifototra amin'ny vidiny mahomby amin'ny famokarana sy ny asa. Mpampiasa sy mpivarotra maro no mampiasa ny teny hoe 'throatbush' ifanakalozana amin'ny 'bush bush', mahazatra sy généo ...